यो Wacom बांस स्पार्क ठूलो हुँदा केही सुविधाहरू टाढा छ. विचार ध्वनि छ - त्यसैले तपाईं कुनै पनि कागज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्याड पछाडि स्मार्ट बनाउन.
ग्राफिक्स ट्याब्लेट निर्माता नयाँ कागज सिस्टम सामान्य A5 कागज मा आफ्नो कलम स्ट्रोक पटरिहरु र छवि रूपमा रू, पीडीएफ, पाठ वा डिजिटल मसी, तर प्रतियोगिहरु मेल गर्न सक्दैन
शीर्षक यो लेख “Wacom बांस स्पार्क समीक्षा: कलम र डिजिटल चाल संग कागज” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, शुक्रवार 8th अप्रिल मा theguardian.com लागि 2016 06.00 UTC
यो Wacom बांस स्पार्क एक डिजिटल आफ्नो स्क्रिबल्ससँग र Doodles रेकर्ड एक संकर कागज नोटप्याड बनाउन लेखनी-निर्माता पहिलो प्रयास हो.
एक लेखनी र ग्राफिक्स ट्याब्लेट निर्माता कलम सिस्टम किन गरिरहेको छ? कागज महसुस र एक ट्याबलेट को स्क्रिन वा सतह को ग्लास अलग व्यवहार किनभने र धेरै मान्छे यो रुचि, तर अझै पनि स्क्यानहरू वा फोटो गर्न Resort बिना एक डिजिटल प्रतिलिपि चाहनुहुन्छ.
यो के गर्न प्रयास गरेका छन्, तर Wacom यो प्रतियोगिहरु गर्न एक रोचक वैकल्पिक विधि प्रयोग गरिएको छ. यो बांस स्पार्क अनिवार्य दुई कुराहरु छ: एक मानक-देख क्या त्यो बलपेन कलम र एक स्मार्ट फोलियो कागज को एक सामान्य A5 प्याड धारण कि.
यो कलम कुनै पनि सामान्य क्या त्यो बलपेन कलम जस्तै व्यवहार; यो सिर्फ थोडा मोटा छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
को Livescribe Smartpen विपरीत 3, यो स्मार्ट छ कि कलम वा कागज छैन, तर कागज तल को प्याड: यो डिजिटल स्ट्रोक रूपमा आफ्नो scrawls दर्पण.
यो पृष्ठमा कलम आन्दोलनहरु र केही दबाव संवेदनशीलता पत्ता द्वारा काम गर्दछ, स्मृति तिनीहरूलाई भण्डारण र बांस स्पार्क अनुप्रयोगमा ब्लुटुथ मार्फत तिनीहरूलाई स्थानान्तरणका एक iOS वा एन्ड्रोइड स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट.
के तपाईं पृष्ठ मा आफ्नो कलम संग आफ्नो काम, एउटा बटन मारा र डिजिटल छवि पछि लागि सुरक्षित छ. त्यसपछि के तपाईं पृष्ठ बारी र फेरि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं छ त्यो पनि बाक्लो छैन व्यावहारिक कुनै पनि A5 प्याड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ – आपूर्ति प्याड छ 30 पानाहरू, तर एक 50-पाना प्याड पनि काम गर्नेछ. यो यस्तै अरू प्रविधिहरू अधिक बांस स्पार्क सबैभन्दा ठूलो differentiator छ: सबैभन्दा तपाईंको गति ट्रयाक गर्न विशेष कागज आवश्यक.
तल मा स्विच फ्लिक र नेतृत्व यसमा संचालित गर्नुपर्छ र केही पृष्ठमा रेकर्ड गरिएको छ तपाईं बताउन हरियो देखाउँछ. यो प्याड केही स्क्रिबल्ससँग र उज्ज्वल नीलो पहिचान गरेको छ जब नेतृत्व नीलो उत्तेजित गर्दछ को कलम कागज छुँदा.
यो धेरै प्रतियोगिहरु भन्दा छरितो छ, जो बराबर उपाय मा राम्रो र खराब दुवै छ.
यो फोलियो कागज राख्न बन्द, कलम, प्याड र सडक लागि सुरक्षित ग्याजेट. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सबै भन्दा राम्रो बिट को कलम सामान्य महसुस छ, कुनै पनि अलिकति ठूलो क्या त्यो बलपेन जस्तै. तर यो पनि एक बिट सस्तो महसुस, यो कलम टोपी सधैं गर्दा प्रयोगमा अन्त मा रहन छैन र तपाईं केवल क्या त्यो बलपेन क्यासेट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ – तपाईं आफ्नो मनपर्ने कलम प्रयोग गर्न सक्दैन.
यो केवल एक सानो बिट nicer महसुस गर्दैन लाजमर्दो छ, दिइएको यो प्रविधिको एक महंगा टुक्रा छ.
यो फोलियो निको महसुस, तर एकदम यस्तो सानो नोटप्याड लागि भारी छ – र A5 एकदम टिप्पणी लिनुभएको र रेखाचित्र लागि cramped हुन सक्छ. यो कलम लागि एउटा सानो कागज खल्तीमा छ, क्लिप द्वारा आयोजित, कागज को खर्च पानाहरू लागि एक खल्तीमा र ठाउँमा तिनीहरूलाई पकड एक चुम्बकीय clasp.
म परीक्षण संस्करण Wacom एक "ग्याजेट खल्तीमा" के भन्छ थियो, तर अरूलाई ट्याब्लेट क्लिप र अन्य संलग्नहरू केही लागि थप उपयोगी हुन सक्छ भनेर.
पैड मा लेखन प्राकृतिक महसुस, तर फोलियो बाँकी को थोक बाटो मा प्राप्त गर्न सक्छन्. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
लिखित टिप्पणीहरू लिनका लागि सिस्टम राम्रो काम गर्दछ. एक पृष्ठ समाप्त, अनुप्रयोगको साथ बटन र सिङ्क मारा. त्यहाँ तपाईंले हस्तलिपि पहिचान प्रयोग पाठको रूपमा आफ्नो हस्तलिखित टिप्पणीहरू निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ, एक JPG छवि रूपमा, PDF को रूपमा वा Wacom मसी तह भाषा रूपमा (हुनेछ) डिजिटल inking ढाँचा समर्थन गर्ने अन्य अनुप्रयोगहरूमा निर्यात लागि फाइल.
यो बांस स्पार्क अनुप्रयोग, Android मा कम से कम, धेरै राम्रो तरिकाले-विकसित छैन. तपाईं मात्र एक समयमा एउटा पृष्ठ निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ, जो निराशा प्राप्त गर्न सक्छन्, र पाठ पहिचान, एक स्वागत यसको अतिरिक्त गर्दा, माथि प्रतिद्वन्द्वी संग बराबर गर्न छैन. यो नियमित पनि मेरो neatest हस्तलेखन लागि मलाई gobbledygook दिनुभयो.
तस्बिरहरू पनि संलग्नहरू रूपमा Evernote निर्यात गर्दै छन्, एम्बेड तस्बिरहरू, ".null" छैन JPG विस्तार संग, जो तपाईं स्वयं यो ठीक प्रदर्शन गर्न प्राप्त गर्न पुन: नामाकरण गर्न र यसलाई मा-लाइन देखाउन प्राप्त गर्न टिप्पणी गर्न यसलाई पुन: थप्न छ मतलब.
छवि निर्यात नोट, पत्र को अन्त मा केही अनौठो upticks सहित, जो स्पष्ट भएको कलम केही गुमराह ट्रयाकिङ छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
को A5 प्याड मा चित्रकला कुनै पनि अन्य मा चित्रकला जस्तै महसुस, बस यो वरिपरि फोलियो बढी एक बिट थोक संग. चेरिल Pilbeam द्वारा स्केच. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
प्रणाली दबाव संवेदनशीलता समर्थन, तर व्यावहारिक मात्र एक कठिन वा मध्यम दबाब संग उद्धार. हल्का लाइनहरु उठाउनु प्राप्त छैन, जो राम्रो स्केचहरू एक बिट मारा र मिस बनाउँछ; प्रयोगकर्ता स्पष्ट पृष्ठ मा देखिने छन् कि रेखा सही कब्जा गरेको छ कि छैन भनेर गरिएको वा थाहा छैन.
सेडिङ पनि बरु बाइनरी छ. एक लाइन उठाउनु भएको छ भने, शीर्ष मा थप लाइनहरु बस ब्लक रंग परिणाम, जो सधैं चाहेको प्रभाव छ र पक्कै पृष्ठ देखिने के प्रतिबिम्बित गर्दैन.
लाइन्स साँचो ट्र्याक छन्, तथापि, यदि पृष्ठ सार्न छैन, तिनीहरू सीधा वा आफ्नो हात व्यवस्थापन गर्न रूपमा बाङ्गो छन् अर्थ. तर पृष्ठ उत्प्रेरित गर्छ, र तल आयोजित हुनुपर्छ, अन्यथा तपाईंको स्ट्रोक रेखाचित्र संग लाइन बाहिर कब्जा छन्, जो भद्रगोल अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ.
यो निर्यात छवि स्पष्ट हल्का कलम स्ट्रोक को सबै भन्दा अभाव, चित्रकला गर्दा गर्दा कागज अलिकति सारे छ, केही रेखाहरू स्थानको बाहिर देखा बनाउने. चेरिल Pilbeam द्वारा स्केच तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो Wacom बांस स्पार्क ठूलो हुँदा केही सुविधाहरू टाढा छ. विचार ध्वनि छ – त्यसैले तपाईं कुनै पनि कागज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्याड पछाडि स्मार्ट बनाउन. But the A5 pad is quite limited, it moves around causing issues for notes and drawings and the app-side of the pairing, where all your digital notes are processed, is not up to scratch.
नकारात्मक: small pad, bulky folio, cheap-feeling pen, page moves, no voice recording, limited app, exporting can be frustrating
Paper versus digital output. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
Livescribe Smartpen3काला संस्करण समीक्षा: the Pen 2.0
10 शानदार संशोधन एप्पल टी लागि विचार गर्नुपर्छ ...
म एक बिजुली कार किन्न गर्नुपर्छ?
अमेजन खेल र4हजार आगो टिभी अप स्ट्रिम सुरु ...
अनुप्रयोग, लेख, ग्याजेटहरू, जीवन र शैली, समीक्षा, शमूएल गिब्स, प्रविधि, बेलायत प्रौद्योगिकी
← Huawei खुलासा किया QuantcastAZONANO P9 र P9 प्लस स्मार्टफोन आईफोन र ग्यालेक्सी मा लिन सबैभन्दा पूर्वानुमानित प्लेस्टेशन4खेल [Ranka] →